Qalab Casriya Oo Loogu Talagalay Calafka Xoolaha - Cakaara News
Qalab Casriya Oo Loogu Talagalay Calafka Xoolaha
Jijiga (CN),Axad, 14ka February, 2016, Si loo kobciyo yoolasha iyo istaraatajiyadaha horumarineed ee dhinaca wax soo saarka iyo khayraadka beeraha waxaa lagama maarmaan noqotay in la helo waxyaabaha sahlaya tabaha casriga ah ee hirgalinta qorshayaasha horumarineed dhinaca beeraha.
Haddaba xafiiska horumarinta beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah ee DDSI oo ka duulaya taaba galinta horumar waara iyo tayaynta qalabyada casriga ah ee wax soo saarka beeraya ayaa soo iibiyay BALER oo ah qalab casriya oo loogu tala galay xidh-xidha Calafka kala duwan ee xoolaha kaasi oo siwayn uga qayb qaadanaya wax ka qabadka cunayaraanta soo food saartay xoolaha ku dhaqan gobolada ay abaartu cimilada isbadashay keentay ay saameeyeen.
Waxaana nooga warbixiyay ahmiyada uu leeyahay mishiinada casriga ah wasiir ku xigeenka xafiiska Horumarinta Beeraha iyo Khayraadka Dabiiciga ah ee DDSI mudane Guuleed Aw Cali Kaahi wuxuuna sheegay faa’iidooyinka ay leedahay istaraatajiyadaha fidineed ee dhinaca wax soo saarka beeraha iyo ka faa’iidaysiga khayraadka dabiiciga ah ee uu deegaanka hodonka ku yahay.
Waxaana ka mid ahaa wasiir ku xigeenka hadalkiisa” Xafiiska Horumarinta Beerah iyo Kheyradka Dabiciga ee DDSI oo fulinaya qorshaha soo saarista Calafka xoolaha iyaado la tageerayo Iskashatooyinka ku hawlan beerashada dhulka, ayaa ku guleystey in Mashruuca galbeedka Godey ee degmada Beercano in laga beero dhul dhan 700 hektar oo isugu jira Iskashatooyiin iyo shaqsiyad maalgaliye ah haddaba si loo sii xoojiya wax soo saarka beeraa oo casriyaysan ayaa waxa uu xafiisku soo Ibiiyey BALER oo ah qalab xidh-xidha Calafka kala duwan. Kaasi oo Calafka u xidh-xidhi doona Afar gees dharaar (626 cm), balac (279 cm) iyo joog dhan (178 cm). Taas oo suura galin doonta in Calafka ay soo saraan iskashatooyinku in ay si haboon loo gaadhsiiyo deegaanka gaar ahaan goobaha ay abaaruhu saameeyeen ee deegaankeena iyo deegaanada dariska sida deegaanka canfarta oo deeqdii ugu horaysay ee calafka xoolaha ah hadda ay xukuumada DDSI gaadhiisay.